Kombiyuutarkayga Daawasho | Martech Zone
Qiyaastii 6 sano ka hor waxaan u iibsaday kaarkeyga ATI Television kombuyuutarkayga. Waxaan ka shaqeynayay mashaariic dhinac ah habeenkii si aan ugu aaso xafiiskeyga oo aan ula qabsado telefishinka inta aan shaqeynayo. Tani waxay ahayd ka hor maalintii laba shaashadood, laakiin shaqo weyn bay qabatay waxaanan ka daawan karay shaashad yar oo ku taal geeska desktop-kayga.
Waqtiyadu wax badan iskama badalin si aan runta kuugu sheego… Waxaan inbadan sugaayay horusocod waxayna umuuqataa inay hada kacsantahay. Marka hore, waan raray Telefishanka Dimuqraadiyadda. Waxay u shaqeysay sida Feed Reader oo ay i bartay Geekbrief TV… Daawashada waxyaabaha tiknoolajiyada geek aad ayey ufududantahay Cali Lewis oo kahadlaya! Dhibaatada aan kula sii waday Dimuqraadiyadu waxay ahayd inaanay la socon waxa la daawaday ee aan si fiican loo daawan. Natiijo ahaan, weligey ma ogaan karin qeybaha aan kujiro. Nabadgelyo dimuqraadiyadeed.
Maalmo ka hor, waxaan helay casuumaad Joost. Cajiib! Waan ku raray oo isla markiiba waan la dhacay. Isticmaalka arjiga ayaa isbedelaya inta udhaxeysa shaashadda buuxda, daaqada, iyo qaabka shaashadda yar - si aad u macquulsan oo sifiican looga fikiray Sidoo kale, waan jeclahay imisa waxyaalood oo menu ka muuqda oo ku baaba'aya isdhexgalka jiirka dabiiciga ah. Liisaska sidoo kale waxay si weyn u isticmaalaan madmadowga sidoo kale, markaa waad sii wadi kartaa daawashada iyo dhageysiga bandhigga asalka oo aan kala go 'lahayn. Tani dhab ahaan waxay noqon doontaa wax lagu dhufto.
Ka dib markii aan qaar caawiyay saaxiibadaa iyaga oo wata degel ay u dhisayeen macmiil, waxay igula yaabeen an AppleTV. Waan ka naxay deeqsinimada… iyo jannada geek. Waxaan u sheegay inay taasi aad u badan tahay… dibna aanan u celin doonin. TV AppleTV runti kama daawaneyso telefishanka kombiyuutarkaaga… wuxuu la mid yahay sida kombiyuutarka oo laga daawanayo kombiyuutarka kombiyuutarka telefishankaaga. Huh? Bal qiyaas Ipod-ka Telefishanka taasna waxay la mid tahay AppleTV. Isku xirnaantu waa sida isticmaalka iTunes ama iPod waxaadna la jaanqaadi kartaa kombuyutarkaaga.
Waxa aan jeclaan lahaa inaan barto ayaa ah sida ugu fudud ee aan iskaga tuuri karo maktabaddayda warfaafinta ee shabakaddayda xagga AppleTV aniga oo aan samayn wax isku mid ah. Waxaan ku hayaa maktabad weyn oo miyuusig ah iyo sawirradeenna oo dhan. Ma doonayo inaan iyaga ku haysto maktabadda Lugood ee maxalliga ah… Waxaan rabaa oo keliya inaan iyaga dejiyo. Waxyaabaha kale ee aan ogaaday waxay ahayd inaad kaliya ku xirmi karto hal xirmo oo iTunes ah markiiba. Ma sugi karo ilaa inta la jabsaday… Waxaan jeclaan lahaa inaan u adeegsado AppleTV-ga sida maktabad muusig oo wadaag ah oo loogu talagalay reerka oo dhan (2 Mac, 2 PC). Waan ogaaday taas qof ayaa horey u jabsaday AppleTV si uu u maamulo OSXMm hmmm. Isha ayaan ku hayaa Apple hacks TV.
Ama waxaa laga yaabaa in Joost uu si uun ula xiriiri doono AppleTV? Yaa garanaya… boodhku wuu degi doonaa dhowr sano qaraxan - laakiin ma sugi karo inaan arko halka uu na geynayo.
Imaatinka tuubada sidoo kale waa ikhtiyaarro Dheeraad ah oo loogu talagalay daalacayaasha. Koofiyad ku socota Scoble, ABC waxay hadda bilaabeen biraawsarkooda cusub ee telefishanka iyo… WOW. Qeexitaanku waa mid layaableh oo is-dhexgalku waa wax fiican. Hadda haddii ay heli karaan bandhigyo qaarkood oo mudan in la daawado!
Tags: abc telefishankacali lewistelefishanka kombiyuutarkadimuqraadiyada tvgeekbrief tvjoostFiidiyoowga fiidiyahatelevision
Maalin Walba Todobaadka
Apr 8, 2007 at 10: 17 AM
waaw .. aad u qabow. Joost wuxuu u muuqdaa mid aad u xiiso badan, isdiiwaangelintooda beta waxay umuuqataa inay hoos u dhacayso xilligan inkasta oo .. taasi ay nuugto.
Apr 8, 2007 at 10: 19 AM
Iyagu waxay leeyihiin foom casuumaad laakiin, nasiib darro, waxaa la ii ogolyahay oo keliya 0 casuumaad! Waan ogahay in dadka kale ee kale ay awood u yeesheen inay casuumaan 5 qof… aniga maahan, in kastoo. Haddii nambarkaasi is beddelo, waan hubaa inaan ku dari doono!
Apr 10, 2007 at 3: 35 PM
Aniga sidoo kale!
Apr 10, 2007 at 3: 39 PM
Kaliya waxaa i casuumay Joost, laakiin waxaa soo baxday in barnaamijkooda uusan taageerin Power PC. Bugger!